Hafa ny mpividy orinasa! | Martech Zone
Talata, Janoary 13, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mpanoratra Bob Bly dia nanome lisitry ny antony tsy itovizan'ny marketing amin'ny orinasa amin'ny mpanjifa. Nanoratra momba izany aho finiavana tamin'ny lahatsoratra taloha, ary mino aho fa ohatra tsara izany. The finiavana an'ny mpividy raharaham-barotra dia miavaka raha ampitahaina amin'ny mpanjifa:
Ilay mpividy orinasa te mividy.
Saro-bidy ilay mpividy orinasa.
Hamaky kopia betsaka ilay mpividy orinasa.
Dingana iray amin'ny fividianana dingana maro.
Fitaomana mividy maro.
Sarotra kokoa ny vokatra ara-barotra.
Ny mpividy orinasa dia mividy tombotsoan'ny orinasany? Sy ny azy manokana.
Andriamatoa Bly dia mandinika amin'ny antsipiriany momba ireo tsirairay avy ary tena manitatra ny tahotra sy ny antony manosika ny mpampiasa orinasa! Ny fisorohana ny adin-tsaina na fahasahiranana, ny tahotra ny tsy fantatra ary ny tahotra ny fahaverezan'ny tompony ao anatin'io dingana io dia antony lehibe tokony hadino ao amin'ny fizotry ny marketing sy ny varotra.
Raha manana minitra vitsivitsy ianao, aza hadino ny mamaky ny lahatsoratra iray manontolo momba ny 7 Fahasamihafana eo amin'ny mpividy B2C sy ny B2B, ny Fitsipika sy ny vahoaka dia samy hafa be. Mety hanampy anao hieritreritra ny paikadinao izany!
Tags: mpiara-BrowseliveninjaMari Smithmivarotra an-tseraseramanafaingana wordpressNy varotra fifandraisana vaovaoVideo chatvideo conference
Iza no mitazona ny lakilen'ny menakao?
Jan 14, 2009 ao amin'ny 12: 37 AM
Lahatsoratra lehibe - koa, ny mpividy orinasa dia mazàna ampahafantarina ary ny tena zava-dehibe, ny mpividy orinasa dia sahirana!
Janoary 14, 2009 amin'ny 2:04 PM
Ny mpanjifanay dia orinasa teknolojia B2B irery ihany fa miatrika fanamby izahay rehefa mivarotra ny serivisy, toy ny orinasa hafa rehetra, na any amin'ny faritra B2B na B2C izy ireo. Ity lisitra ity dia misy hevitra tsara tokony hotadidintsika raha toa ka kivy isika mandritra ny dingan'ny fampivoarana orinasa; tsy mitovy amin'ny mpanjifa tsirairay ny fanantenantsika, teboka iray fantatray tsara fa tsy maharary ny ampahatsiahivana ombieny ombieny. Tsy andriko ny hamaky ny lahatsoratra feno - misaotra amin'ny fanondroana azy.